अस्ट्रेलिया : ‘कमाउन होइन, पढ्नकै लागि जान्छन्’ – Chitwan Post
अस्ट्रेलिया : ‘कमाउन होइन, पढ्नकै लागि जान्छन्’
प्रकाशित मिति: आइतवार, अशोज १४, २०७५
‘ग्लोबल रिच’ शैक्षिक परामर्श केन्द्रले विगत चार वर्षदेखि चितवनबाट सेवा दिँदै आइरहेको छ । नेपालमा चारवटा शाखा रहेको केन्द्रको मुख्य कार्यालय भने भारतको कोलकत्तामा रहेको छ । केन्द्रले अस्टेलिया तथा न्युजिल्यान्ड पढ्न जाने विद्यार्थीहरुलाई परामर्श दिँदै आइरहेको छ, जहाँबाट उच्च शिक्षाका लागि धेरै विद्यार्थीहरु विदेश गएका छन् । प्रस्तुत छ, यसै विषयमा केन्द्रित रहेर चितवन पोष्ट दैनिकले केन्द्रका चितवन शाखा प्रमुख सुरेश पौडेलसँग गरिएको संवाद :
ग्लोबल रिचले के काम गर्छ ?
— अध्ययनका लागि विदेश जान चाहने विद्यार्थीहरुलाई काउन्सेलिङ गर्ने सेन्टर हो, ग्लोबल रिच । विशेषगरी, अस्टे«लिया, न्युजिल्यान्ड आदि देशमा अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीका लागि हामीले काउन्सेलिङ गर्दै आइरहेका र्छौँ ।
पछिल्लो समय कन्सल्टेन्सी खुल्ने क्रम बढ्दो छ, प्रतिस्पर्धा पनि राम्रै छ हैन ?
— ग्लोबल रिचले अस्टे«लियाका प्रायः सबै युनिभर्सिटीसँग अनुमति लिएको छ । न्युजिल्यान्डलगायतका अन्य देशहरुमा पनि विद्यार्थी पठाउन पाइने अनुमति लिइएको संस्था हो । त्यसैले, हामीलाई खासै अप्ठ्यारो छैन । तर, प्रतिस्पर्धा नै छैन भन्नचाहिँ मिल्दैन ।
जुनसुकै विद्यार्थीको पनि उद्देश्य त आखिर कमाउने नै हो नि हैन ?
— मेरो बुझाइमा कुनै पनि विद्यार्थी यति ठूलो लगानी गरेर अस्ट्रेलिया, क्यानडा, न्युजिल्यान्ड जाँदैछ भने सुरूमा उ पढ्नकै लागि जाने हो । केही समयअघिमात्रै हाम्रै माध्यमबाट रमेश पौडेल, श्रीकृष्णकान्त पौडेल, शक्ति श्रेष्ठ र युवराज शर्मा पूर्ण छात्रवृत्तिमा विद्यावरिधि गर्न अस्ट्रेलिया जानुभएको छ, जहाँ कुनै पनि शुल्क लाग्दैन । उहाँहरुले उल्टै मासिक दुई हजार सात सय डलर पैसा पाउनुहुन्छ । त्यसैले, पहिला पढाइ अनि बल्ल कमाइ । तर, अस्ट्रेलिया पुगेका कुनै पनि विद्यार्थीले ब्याचलर, मास्टर भने गर्न सक्नुपर्छ ।
कन्सल्टेन्सीहरुलाई विद्यार्थी पठाएर पैसा खाएको आरोप लागिरहन्छ नि ?
— जसले काम गर्छ उसलाई आरोप पनि लाग्छ । तर, ग्लोबल रिचले मात्रै होइन कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग पैसा असुल्न पाउँदैन । अहिलेको आधुनिक प्रविधियुक्त समयमा विद्यार्थीका लागि वेबसाइट, ब्रुसरलगायतमा नै युनिभर्सिटी र त्यसमा लाग्ने शुल्कबारे प्रस्ट उल्लेख गरिएको हुन्छ । विद्यार्थीले जति पैसा बुझाउँछन्, सबै आफू पढ्न जाने युनिभर्सिटीमा बुझाउने पैसा हो, हामीले लिने पैसा होइन । त्यो पैसा सीधै युनिभर्सिटीको खातामा जम्मा हुन्छ । त्यसैले, हामी त एउटा माध्यममात्रै हौँ । तर, कुनै पनि कन्सल्टेन्सीले युनिभर्सिटीमा बुझाउने शुल्क आफैँले लिन्छ भने त्यसमा चाहिँ शंका मान्नु स्वाभाविक हो ।
सेमिनार, गोष्ठीलगायतका ठूला कार्यक्रम गर्छन्, त्यत्रा कार्यक्रम गर्ने पैसाचाहिँ कहाँबाट आउँछ त ?
— झट्ट हेर्दा ठूलो खर्च भएको जस्तो देखिन्छ । तर, हामीले एकदिने कार्यक्रम गर्दा हल भाडा र खानाको खर्चमात्रै हुने हो । त्यो पनि हामीले विज्ञापनबाट उठाएर व्यवस्थापन गर्दै आएका छौँ । युनिभर्सिटीबाट आउने प्राध्यापकहरुलाई उतैबाट पठाएकोले हामीले खर्च गर्नुपर्दैन ।
बेलाबेला प्रशासनको निशानामा पनि पर्ने गरेका छन् । अनुगमन गर्ने क्रममा केही कन्सल्टेन्सीहरु बन्द पनि भए, किन त्यस्तो हुन्छ ?
— सरकारको आफ्नै पोलिसी र मापदण्ड छ । त्यसलाई मान्दिनँ भन्न कसैले पनि मिल्दैन । त्यसैले, सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेका संघसंस्था बन्द गराउनु स्वाभाविकै हो ।
ग्लोबल रिचबाट उच्च अध्ययनका लागि अहिलेसम्म कति विद्यार्थी विदेश गए ?
— चितवनमा ग्लोबल रिच स्थापना भएको चार वर्ष भयो । यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै अस्टे«लिया गएका छन्, केही न्युजिल्यान्ड पनि गएका छन्, र केही जाने तयारीमा छन् । यति नै भन्ने छैन ।
विद्यार्थीको रोजाइमा सबैभन्दा बढी अस्ट्रेलिया नै पर्नुको कारण ?
— सबैभन्दा पहिले विद्यार्थीका लागि गुणस्तरीय शिक्षाको आवश्यकता पर्छ, सँगसँगै आफू कसरी सुरक्षित हुने भन्नेमा पनि भर पर्छ । त्यसैले, सुरक्षित भविष्यका लागि पनि अस्ट्रेलिया नै बढी जाने गरेका छन् । पढाइ पूरा गरिसकेपछि रोजगारको हिसाबले अस्ट्रेलियामै काम गरे पनि स्वदेश फर्किए पनि राम्रो आम्दानी गर्न सकिने भएकाले विद्यार्थी र अभिभावकको रोजाइमा अस्ट्रेलिया नै हुने गरेको छ ।
नेपाल फर्केर स्वदेशमै केही गरेका उदाहरणहरु छन् ?
— प्रशस्तै छन् नि । अस्ट्रेलिया पढ्न जाने विद्यार्थीले प्रयोगात्मक शिक्षा आर्जन गर्न पाउँछन् । त्यहाँको सिस्टम र टेक्नोलोजीका कारण पनि नेपाल फर्किएपछि केही न केही गर्न सकिन्छ र गरेका पनि छन् । अस्ट्रेलियामा पढाइसँगै काम गर्दा पनि आम्दानी राम्रो हुने हुँदा त्यहाँको कमाइलाई नेपालमै लगानी गर्न चाहने धेरै छन् । लगानी गरेकाहरुले पनि सफलता हासिल गरेका छन् । ज्ञान र सीप जुन देशबाटै लिए पनि नेपालमा आएर प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो यो ।
विदेश गएर विद्यार्थी अलपत्र परेका घटना पनि सुनिन्छन् नि ?
— हो, जोकसैले पनि आफ्नो छोराछोरीलाई पढ्नका लागि विदेश पठाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यसबारे तपाईंहरु सचेत हुनुस् भनेर हामीले भन्दै आइरहेका छौँ । यसबारे विद्यार्थी र अभिभावक दुवैले बुझ्न जरूरी छ । अस्ट्रेलियाका युनिभर्सिटी पुगेर पढ्न सक्ने क्षमता आफूमा छ कि छैन भन्ने कुराले पनि फरक पार्न सक्छ । त्यहाँ गइसकेपछि युनिभर्सिटीलाई केही समयसम्म त घरबाटै शुल्क बुझाउनुपर्छ । किनकि, विद्यार्थीले जम्मा २० घन्टामात्रै काम गर्न पाउँछ, त्यसले शुल्क बुझाउन पुग्दैन । बढी काम गरे पढाइ बिग्रने डर । त्यसैले, जानुभन्दा पहिले नै स्पष्ट हुनुपर्दछ । यति धेरै कन्सल्टेन्सी छन्, परामर्श लिन समस्या छैन ।
अस्ट्रेलिया जानका लागि कति खर्च लाग्छ ?
— त्यो त युनिभर्सिटीअनुसार हुन्छ । त्यहाँको ट्युसन शुल्क कति छ भन्नेमा पनि भर पर्छ । त्यसैले, यत्ति नै लाग्छ भनेर यकिन गरेर भन्न सकिने अवस्था छैन ।
शिक्षा : देश विकासको मूल आधार
कहिलेसम्म ठगिने यात्रु ?